Ole Gunnar Solskjaer Oo Ka Warbixiyay AFARTA Xiddig Ee Ka Dhaawacan Man United Ka Hor Kulamada Burnley & Liverpool | Laacibnet.net
Ole Gunnar Solskjaer Oo Ka Warbixiyay AFARTA Xiddig Ee Ka Dhaawacan Man United Ka Hor Kulamada Burnley & Liverpool
Ole Gunnar Solskjaer ayaa xaqiijiyay in Paul Pogba, Victor Lindelof iyo Luke Shaw uu shaki weyn ku jiro ka qeyb qaadashadooda kulanka ay Manchester United la ciyaareyso Brunley laakiin waxa uu aaminsan yahay in seddexda xiddig ay taam u noqon doonaan kulanka Liverpool ee isbuuca danbe.
Seddexda ciyaaryahan ayaa ka maqnaa kulankii FA Cup ee ay ugu soo baxeen wareega afaraad ka dib goolkii uu Scott McTominay ka dhaliyay Watford.
Noocyada dhaawac iyo halistooda lama cadeynin laakiin Solskjaer ayaa si dhow u la socon doona soo kabsashadooda maanta oo Isniin ah ka hor inta uusan go’aan ka gaarin haddii ay ka qeyb qaadan karaan kulanka habeen danbe ka dhacaya Turf Moor.
Markii la weydiiyay haddii seddexda nin ay diyaar u yihiin kulamada horyaalka ee soo socda, Solskjaer ayaa ku jawaabay:
“Waan rajeynayaa, waa hubaal kulanka Liverpool dhamaantood waa ay ciyaari doonaan.
“Ma hubo haddii ay ciyaari karaan kulanka Burnley.
“Tababar yar ayay sameynayaan ka dib ayaan arki doonaa sida xaalkooda yahay Isniinta.”
Daafaca dhexe Eric Bailly ayaa isna la qiimeyn doonaa ka hor kulanka habeen danbe ee Burnley ka dib markii ay isku dhaceen saaxiibkiisa goolhaye Dean Henderson intii ay socotay kulankii ay ka badiyeen Watford ee FA Cup.
Si kastaba, waxa uu daafaca reer Ivory Coast ku tilmaamay dhaawacii qoorta ka soo gaaray inuu ahaa kaliya jug yar.